स्वस्थ खाना को महत्त्वबारे लेखिरहन्छु : डा. अरुणा उप्रेती::देश र जनताप्रति समर्पित
स्वस्थ खाना को महत्त्वबारे लेखिरहन्छु : डा. अरुणा उप्रेती
डा . अरुणा उप्रेती
‘तपाईं पोषणकै बारेमा कति लेखिरहनुहुन्छ ? तपाईंले लेखेका कुरा पढ्दा मलाई पनि कण्ठै भइसक्यो । अब कुनै नयाँ विषयमा लेख्नुस् न,’ एक पाठकले केही दिनअघि मलाई भनेका थिए, ।
‘अरूणाले भनेर नहुने रहेछ, के गर्ने, पाहुनालाई नभई नहुने’ भन्ने मेरा साथीले केही दिनअघिको भोजमा ‘कोल्ड ड्रिंक’ दिएनन् । कागती, पुदिना र बिरे नुन हालेर सर्बत बनाएर खुवाए । घरमै बनाइएको फलफूलको रस खुवाए । तामाको रस, मार्सी भात, सिमीको रस, टिमुर र गोलभेंडाको अचार खुवाए । तउनले भने, ‘आज त अरुणाको लेख पढेर र खाना खुवाएजस्तै भयो ।’ म नि दंग परें, मेरा साथीमा समेत यति प्रभाव परेछ । वास्तवमै मेरो लेखनीले केही न केही काम त गरेछ ।
पहिले माया गरेर छोरीले मागेजस्तो बजारीया र महँगो खाना दिँदा दिँदा छोरीले घरको खाना नै खान छोडेकी हुन् । चाउचाउ, कोकाकोला र फ्यान्टा उनको खाना हुन्थ्यो । खाजा पनि बिस्कुट र कुरमुरे आदि हुन्थे । उनमा यस्तो कुराको लत बस्दै गयो । र, उनको तौल अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गयो । अहिले उनी अनेक समस्याबाट पीडित छिन् । त्यस्तै आमाबुबा पनि जंक फुडको लत छुटाउन लागिपरेका छन् ।
यस्ता त धेरै घटना छन् ।मेरा लेखले पाठकलाई पोषणबारे जानकारी दिई स्वस्थ हुन प्रेरित गर्छ त्यसैले म स्वस्थ खाना खानुको महत्त्वबारे लेखिरहन्छु ।